Ny lahatsoratr'i Bill Acholla momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Bill Acholla
Tsy ela akory izay, ny paikadin'ny SEO dia ahitana ny fahazoana laharana amin'ny teny lakile. Ny teny lakile no antony voalohany nandrefesana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ireo mpanorina tranokala dia mameno ireo tranonkala amin'ny teny lakile, ary ny mpanjifa dia te-hahita ny valiny. Ny valiny anefa dia nampiseho sary hafa. Raha toa ny fampianaranao SEO ho an'ireo vao manomboka mampiasa fitaovana Google hahitana teny lakile ary avy eo apetrakao ao amin'ny tranokala manerana, dia mety handeha io